फेरि सवारीमा जोर–बिजोर ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित केही जिल्लामा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि निजीसहित सार्वजनिक सवारीमा फेरि जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्न प्रस्ताव पनि गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी)को निर्देशक समितिमा विचाराधीन छ ।
सरकारले २६ असारबाट निजी सवारी साधानको जोरविजोर हटाएको थियो भने उपत्यकामा ३ जिल्ला र बाहिर जिल्लामा सार्वजनिक सवारी चलाउन दिएको थियो । साथै, भदौ १ बाट लामो दूरीको सवारी पनि चलाउने तयारी छ । तर, लकडाउन खुला भएसँगै कोरोना संक्रमण बढेको छ भने उपत्यकामा पनि जोखिम थपिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं प्रवेश गर्नेलाई फेरि नयाँ नियम
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा संक्रमण फैलिन नदिने हो भने सवारी साधनमा जोरबिजोर, बाहिरबाट आउनेहरूलाई १४ दिन अनिवार्य होम वा स्थानीय क्वारेन्टिन जस्ता उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन ।
फेरि जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने विषयमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)सहित स्वास्थ्यका विज्ञसँग मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो अवस्था र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छन् ।
सिसिएमसी बैठकमा संक्रमण बढ्दै गएपछिको वर्तमान अवस्थामा अति आवश्यक क्षेत्र बाहेकलाई बन्द गरेर निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं उपत्यकामा किन बढ्यो कोरोना ?
सरकारले पछिल्लो पटक संक्रमणको गतिको अवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लामा रहेका कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)लाई समेत अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार समूदायमा संक्रमण फैलिएको भन्दै केही स्थानीय तहहरूले लकडाउन घोषणा गरिसकेका छन् । भने केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि फेरि लकडाउन गर्नेनगर्नेबारे विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञसँगको छलफलमा जुटेका छन् । विज्ञको सुझावअनुसार सरकारले आगामी रणनीति तय गर्नेछ ।
साउन ७ मा लकडाउन अन्त्यपछि नागरिकमा हेलचेक्र्याइँ देखिएको छ । बजारलगायत सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड बढेको छ । भारतलगायत देशबाट आउनेलाई सीधै घरपरिवारको सम्पर्कमा जान दिइएको छ । यस्ता गतिविधिका कारण समुदायमा कोरोना फैलिएको विज्ञको भनाइ छ ।
ट्याग्स: काठमाडौं उपत्यका, जोर-बिजोर, लकडाउन